mardi, 18 août 2015 12:43
Mpiasa an-trano nitsoaka niaraka amin’ny vola enina hetsy Ariary
Tovolahy iray mpiasa an-trano no nitsoaka niaraka amin’ny vola enina hetsy Ariary nangalariny tamina mpivarotra iray niasany tany Sakaraha. Nivavaka tany am-piangonana ireto mpivady mpivarotra sy ny zanany telo, ny alahady maraina teo ka ilay mpanampy irery no sisa tao an-trano nanao raharaha sy nikarakara sakafo antoandro. Ankona ireto fianakaviana rehefa tafaverina fa tsy tao an-trano intsony ilay tovolahy. Nokarohina ny manodidina fa tsy hita. Nantsoina tamin’ny findainy, fa tsy namaly. Ny fahitana ny fitoeram-bola tao amin’ny efitra fatorian’izy mivady efa nibanaka no nanaitra ireto mpivady, ary tsy tao intsony ny vola rehetra saika hividianana entana ny alatsinainy. Nentina toy ny zanaka tao an-trano ity tovolahy ity no nivadika.